I-Hector Bellerin Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSpain I-Hector Bellerin Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leNqabana yebhola yeBhola eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Omlwanyana". Ibali lethu leHector Bellerin yabantwana kunye ne-Biography Fact ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubuhlobo bentsapho, ubomi bentsapho kunye neeninzi ezininzi eziziwayo.
Ewe, wonke umntu uyazi ngeendlela zakhe ezikhawulezayo kodwa abambalwa bacinga i-Biographie kaHector Bellerin enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UHéctor Bellerín Moruno wazalwa ngomhla we-19th ka-Matshi 1995 e-Barcelona, ​​eSpain. UyiPisces eqinisekisiwe ngokuzalwa. UHector wazalelwa kuMnu noNksz Maty Moruno bobabini, abaseSpanish nabemi baseCatalonia.
UHéctor waqalisa iintsuku zakhe zebhola kwi-Barcelona Youth System ukususela kwi-6 ubudala. Wachitha iminyaka eyi-8 efunda ifilosofi yebhola ye-Barcelona kwi-attack and not-right-wing formation.
Nangona esemntwaneni, uHéctor wabonisa ukuhamba kwakhe kombane kunye nesitayela sokuhlasela ngexesha lakhe e-Barcelona. Kwimizuzu emininzi, wavotelwa 'Umntu weentambo' kwii tournaments. Ukuthandwa kwakhe kwenyuka kwi-2008 Ubungqina be-Canillas yamazwe ngamazwe eMadrid apho wanikezwa khona indoda yombhoso wezokuvakasha eyanikelwa nguZinedine Zidane.
Wonke umdlali weFc Barcelona wayemthanda iBellerín. Bafumana uvuyo ekumbukeni asebenzise intshukumo yakhe ngokuthatha abachasayo abachasayo kunye nokuhamba ngokukhawuleza kwindawo ekhuselayo. Uvuyo lwabo lwabanjiswa ngunyana omnye, uArsene Wenger.
Njenge Cesc Fabregas, IBellerin ngexesha elimncinci le-16 lahlanjwa ngu-Arsene Wenger ukuya eMntla London. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ubomi bukaHector Bellerin kunye nokugqithisa umgca uthathe ukuguquka okuthakazelisayo ukususela ekufikeni kwakhe eNgilani. Ubenalobudlelwane obude kunye nomzekelo omhle weSharree Patel.
Hector kunye noSharree Patel
Ubuhle obumnyama buhlala eLondon kwaye buzimpembelelo zaseNdiya. Uyilungiselela ukuthandwa nguCalvin Klein kunye ne-brand ye-Ellesse yemidlalo kwaye unabalandeli abangaphezu kwe-20k kwi-Instagram account yakhe ebizwa ngokuba 'iamshree'.
Shree nguye kuphela owamnceda uHector ukulwa no lonwabo xa efika eLondon njengomfana we-16 ubudala. Ukuqalisa ulwalamano nje kuphela emva kwenyanga yokufika kwakhe, uHector akazange azive elahlekile kwaye yedwa kule dolophu yaseLondon.
Bobabini bothando bathanda ukwabelana ngezithombe zabo bonke abazithandayo. Isithomi esingezantsi sabelwana ngokubakho emva kokulalana.
Hector kunye noSharree, bonke bathandwa.
Ukuchitha ixesha elihle kummandla wolwandle ngokwenene, omnye umhlobo obabini abathandayo bahlanganyela. Abafowuni abayi kumangaliswa xa bevakalisa umtshato wabo nanini na.
Hector kunye nentombi, ukuchitha ixesha lokulunga elwandle
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Umhlobo weCoD
Njengenkwenkwezi ye-16 eneminyaka eli-50 edlulela kwelinye ilizwe, iBellerín yafumana ubomi eNgilani inzima kumaxesha amaninzi. Wayefuna uncedo ekujonganeni nomqobo wolwimi kunye noqeqesho olunzima lwe-Arsenal academy.
Ubomi bakhe babunzima kakhulu kwaye akukho zinto ezininzi abakwenzayo ngexesha lakhe elilodwa lokubaphazamise udumo lwakhe. Ukuchitha ixesha kunye nentombi yakhe, uHector uchitha lonke ixesha lakhe ukudlala i-Call of Duty kwi-PlayStation 4.
I-Hector- I-CoD fan yokufa
Eyona nto, xa engaphuli i-flank e-Emirates, ngokukhawuleza uthabatha amaqhosha ekhonsoli yakhe ye PlayStation. Ngaphantsi kwengxoxo yakhe kwi-Call of Duty Event.
Yabafundi bakhe beqela le-U18 abaye bamzisa kwi-Call of Duty, kwaye iminyaka emihlanu phantsi komgca waxhumela umdlalo wevidiyo yomdlalo wokudlala. UBellerín uthi kwiminyaka emibili yokuqala emva kokuba uqale ukudlala umdlalo, uya kudlala yonke imini emva koqeqesho.
Ngo dliwano ndlebe ilanga, UBellerín uthe oku kulandelayo. "Ndiyikhululo loxinzelelo kum. Andiyifaki ixesha elide lokudlala, ngoko xa ndihamba namabini am, ndidlala ukudlala iiCDD kuphela. "
Ama-Asides adlala iCod kunye nokuchitha ixesha kunye nentombi yakhe, uHector uthanda ukubukela uchungechunge lwee-TV kunye nenja yakhe edla ngokunikela ngqalelo kwizinto zonke ze-movie.
Hector kunye nenja yakhe ebonisa ingqalelo kwi-movie
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Ukhawuleza kukaTheo Walcott
Ukususela ekufikeni kwakhe kwiklabhu e-2006, Theo Walcott ube ngumdlali osheshayo eMntla London. Ekuqaleni kwexesha le-2014-15, waphula Theo WalcottI-40-meter imitha yeArsenal irekhodi ye-1 / 100th yesibini.
Theo Walcottirekhodi kwiimitha ze-40 yimizuzwana ye-4.78 kodwa iSpaniard yenze loo nto ngexesha le-4.77 kwi-2015. Nangona kunjalo, iingxelo ngoku zibonisa ukuba i-Bellerín iye yaphuca loo xesha phantsi kwe4.42 ecacileyo.
Enyanisweni, umkhuseli we-Arsenal ukhawuleza kwaye unokukwazi ukuphuma "I-Triple-Triple" Umnxebi wegolide uNorin Bolt, ovale ngemizuzwana ye-4.64 ukumboza i-40-metri yokuqala xa ebeka irekhodi yehlabathi kwi-100-meter sprint.
Nge-Intanethi isaziso, bobabini i-Bellerín kunye neBolt baye baxhamla ngokumngcebelelana ngomnye Twitter. Ngaphandle kokungathandabuzeki, uHector uthathwa njengomnye wabadlali bebhola abahamba ngokukhawuleza kwihlabathi.
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Ukugwetywa ngokungalunganga
Ngebusika kwe2013, Arsène Wenger wathumela umdala oneminyaka eyi-18 ngemali mboleko kwi-Championship ngaseWutford. Ngaloo xesha iSpanish yenze i-8 ibonakale kwaye abalandeli abaninzi baseArsenal babengakwazi ukuqonda isizathu. Njengoko kwacaca ukuba lo mfana akayi kufumana imizuzu ayifunayo, uWenger wamkhumbula emva kweenyanga ezimbini kuphela.
UHector wayekhe wagwetywa ngokungafanelekanga nguWatford
Kwiminyaka embalwa kamva, umphathi weWwatford uTroy Deeney wasinika ingqiqo yokuba kutheni umqeqeshi weLa Masia wadlala imidlalo embalwa kangaka kwi-Vicarage Road. Utyhile ukuba umphathi ngelo xesha, uGiuseppe Sannino, ufumene ukuba iSpaniard ibe yinto elula kakhulu kwi-tackle kwaye ayikhuseli ngokufanelekile ukudlala ecaleni lakhe.
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Ukuguqulwa
Ukuhamba kwakhe kwintlambo kunye nokulawulwa kwebhola ye-fanciful kwakungayinika. Kodwa ngaphambi kwexesha lakhe eLondon, uHector Bellerín wayengumlenze eBarcelona. Kwaye kuphela xa efika eMntla London eya guqulwa ibe yinto epheleleyo.
Ibiyi Wenger yena owenza umnxeba wokugqibela ukuba uyimbuyisela kwindawo eyiyo okanye ayikho. UmFrentshi ngokwakhe wabela umqeqeshi oncedisayo uSteve Bould ukuba abe neeseshoni enye kunye nomntwana ukuba ancede aphucule ukuguquka kwakhe. UBould kwafuneka amfundise indlela yokukhusela ukususela ekuqaleni.
Namhlanje, i-Bellerín ngoku iphakame njengomnye wabadlali abasemgangathweni abaselula kwi-Premier League kuphela kodwa ibhola lebhola lehlabathi.
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Igraduduate
Kwi-2016, uHector ubhalise kwiklasi ye-intanethi kwiYunivesithi yasePennsylvania, isikolo se-ivy seague ePhiladelphia.
UBellerin ulandela idiploma ekuthengiseni, kwaye ujonge iintetho kwi-intanethi kwaye uya kugqiba iimviwo kwiwebhusayithi yesikolo.
Lo mfana usandul 'uvume ukuba ufumanisa inkqubo engaphantsi kwesi sifundo, kodwa yinto enjalo kwindlela ayeyithandayo.
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Iimpawu zeTattoo
U-Hector Bellerin uyaziwa ngokuba ukhawuleza uhlalela umgca kodwa naye wazifumanisa ukuba ubugcisa bakhe bobugcisa.
I-speedster yaseSpanish ine-sleeve epheleleyo ihla isandla sayo sokunene esibandakanya umfanekiso weNtombikazi uMariya ehamba ubude bayo.
UHector wathi: "Ndandinomnye wokuqala, i-rosari, umkhulukazi wayesebenzisa njalo ukuzithenga kum, kodwa ngokucacileyo andinakuyidlala nabo kuba awukwazi ukugqoka nayiphi na ingubo. "Ngoko ndagqiba kwelokuba ndiyibhale. Ndicinga ukuba ndiphakathi kwe15 okanye i-16 xa ndiyenzile, kwaye oko kwakungowokuqala.
U-Hector naye unobumba lwehobe kunye nosapho lwezandla. Giant 'Usapho' umele umzala wakhe, ugogo, udade, umama kunye noyise kunye nomkhulu kunye nabo bonke abaseBellerin. KuHector, yonke into yintsapho yam.
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
UHéctor Bellerín Moruno uvela kwimvelaphi yasekhaya yaseCatalan. Abazali bakhe, baziwa nje ngokuba nguMaty Moruno bangamaCatalan. Banikela unyana wabo kwiC FC Barcelona ngexesha lethenda le-6. Ibhola lotyalo-mali liye lahlawula.
UBellerin wathenga ikhaya elitsha eLondon, apho abazali bakhe kulindeleke ukuba bahlale khona. Bebehlala eLondon kufuphi noHector. Kutshanje, wathenga enye indlu eBarcelona. Oku kwafika phakathi kwe-speculation kwi-Arsenal yokuphuma.
I-Hector Bellerin Ibali leNgcaciso yabantwana Plus Untold Biography Facts -Izakhiwo zeZodiac
U-Hector Bellerin uqinisekisile iPisces kwaye unezi zinto ezilandelayo kubuntu bakhe;
Amandla kaHector Bellerin: Inceba, ubuciko, inembile, inobulumko, isilumko, umculo. Ubuthathaka bukaHector Bellerin: Ukwesaba, ukuthembela ngokugqithiseleyo, ukudabuka, umnqweno wokubalekela into eyiyo, inokuba yintlanzi okanye i-martyr. Yintoni uHector Bellerin ayithandayo: Ukuba yedwa, ukulala, umculo, uthando, imidiya ebonakalayo, ukubhukuda kunye neengongoma zomoya. Yintoni uHector Bellerin ayithandiyo: Yazi-konke, ukugxeka, ukudlulela okudlulileyo ukuhlambalaza nobukrakra baluphi na uhlobo.
Isilwanyana sasendle esithandwa nguHector Bellerin: Wathi isilwanyana esiyithandayo sisiger ngenxa yokuba uyayithanda "Indlala". Ngokwenjenjalo, oku kuthetha ukuba iSpanishi unesidingo esifanelekileyo sokuphumelela.
Siyabulela ngokufunda iNdaba kaBantwana beHector Bellerin kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!
IJan Bernat Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-Gerard Pique yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts
I-Sergio Busquets Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-Cesc Fabregas Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts